Hoyga ardayda
Waxbarashada afka Swedish ama Ingiriiska?
Jaamacad ama kulliyad jaamacad?
Koorsooyinka iyo barnaamijyada
La taliyaha iskuulka
Xaq u yeelashada waxbarashada
Dalbashada tacliin sare
Shaqada waxbarashadaada ka dib
Qaababka kale ee waxbarashada
Waxaa jira dhowr hoy oo kala duwan ee ay ardayda heli karaan. Haddii laguu oggolaado in aad koorso ama barnaamij aad ka qaadato jaamacad ku taala halka aad degan tahay, halka aad degan tahay ayaad sii degnaan karta. Iqtiyaarka kale ayaa waxay tahay waxaad kiraysan karta guryaha ay ardayda degan yihiin ama hoolka ardayda ayaad qol ka kiraysan kartaa. Haddii aad degan tahay hoolka ardayda, qol adiga gooni kuu ah ayaa lagu siin doonaa oo meelaha kushiinka ayaad arday kale aad la wadaagi doontaa.
Noocyada hoy ee ay ardaydu heli karaan waxay ku xiran tahay halka ay jaamacaddu ku taal. Barta ugu wanaagsan ee aad ka heli karto macluumaad ku saabsan waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee jaamacadda aad qorshaynayso in aad dhigato. Hoyga ardayda - iyo macluumaadka ku saabsan - waxaa bixin kara iskuulka, Ururka Ardayda, ama shirkaddaha hoyga gaarka ah.
Helida bar lagu noolaado inta waxbarashada lagu jiro ayaa ah mid culus. Waxaa aad muhiim u ah in raadinta waqti hore la bilaabo, gaar ahaan haddii aad waxka baranayso magaalo wayn ama degmo. Halkan studera.nu, macluumaad dheeraad ah ee sida loola xiriiro waxaad ka heli kartaa dhammaan jaamacaddaha iyo kulliyaddaha jaamacaddaha ee wadanka Sweden, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan hoy hubaal ah.